China JY-2510 DefoamerPaper ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-emepụta ya Juyou
Ụlọ ọrụ JY-2510 DefoamerPaper
JY-2510 defoamer nwere polysiloxane, polysiloxane gbanwetụrụ, resin silicon, silica, onye na-achụsasị, na onye na-eme ka ihe kwụsie ike. Mmetụta kwụsiri ike na alkaline siri ike (pH10.0-14.0) yana oke okpomọkụ (60 ℃ -90 ℃). Ngwa njikwa akara ụfụfụ ozugbo. Omume njikwa ụfụfụ na -adịgide.
JY-2510 defoamer nwere polysiloxane, polysiloxane gbanwetụrụ, resin silicon, silica,
onye na -agbasasị, na onye na -eme ka ahụ sie ike.
Mmetụta kwụsiri ike na alkaline siri ike (pH10.0-14.0) yana oke okpomọkụ (60 ℃ -90 ℃).
Ngwa njikwa akara ụfụfụ ozugbo.
Omume njikwa ụfụfụ na -adịgide.
Viscosity (25 ℃)，mPa · s
300 ~ Ọ dị mma500
Anionic adịghị ike
1% n'ime mmiri
Nrụpụta pulp. / Ime ka akwa akwa (ịchọ, ịchacha, na ịcha ọcha) / akwa akwa (akwa akwa) / nha acrylic / nhicha ụlọ ọrụ / ọgwụgwọ nsị.
JY-2510 defoamer nwere ike jiri mmiri siri ike gwakọta ya. N'ime nsị, ọsọ mkpali dị n'etiti 30 ruo 60 rpm na akwadoro oge mkpali maka ihe karịrị nkeji iri. Biko rịọ ngalaba ọrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ maka usoro mgbaze a kapịrị ọnụ. Ụlọ ọrụ anaghị anabata ibu ọrụ ọ bụla maka mfu ọ bụla nke onye ahịa nwere ike bute n'ihi ojiji ezighi ezi.
A na -atụ aro na agbakwunyere ngwaahịa a ebe defoamer nwere ike gbasasịa n'ụzọ dị mfe. Usoro ngwa akọwapụtara dị ka ndị a:
Ịkwado akwa akwa: Tinye ngwaahịa ozugbo na usoro mbubata.
Akwa akwa akwa: Tinye ngwaahịa ozugbo na sistemụ ịcha akwa.
Ogo acrylic: Tupu-jiri akụkụ 2.5-9 nke mmiri gbara ọkpụrụkpụ tụgharịa ngwaahịa a, tinyezie defoamer na nha acrylic mgbe emechara nha acrylic. Ma ọ bụ gbakwunyere ngwaahịa ahụ na usoro nha. Usoro onunu a tụrụ aro dị n'etiti 0.1 ruo 0,5% maka ngụkọta nke usoro.
Nhicha ụlọ ọrụ: Tupu-jiri akụkụ 2.5-9 nke mmiri gbara ọkpụrụkpụ tụgharịa ngwaahịa a, wee gbakwunye ngwaahịa ahụ na nhicha ụlọ ọrụ dị ka ihe mejupụtara. Usoro onunu a tụrụ aro dị n'agbata 0.05 ruo 1% maka ngụkọta nke usoro.
Nsị ọgwụgwọ: Na mkpokọta, a na -agbakwunye ngwaahịa ahụ ebe afụ ọnụ na -etinye uche, dị ka ntinye nke tankị ikuku ma ọ bụ ọdọ mmiri mkpofu mmiri. Ọgwụ a bụ 0,5 ruo 100 ppm, mana ekwesịrị ibu ụzọ nwalee ọkwa mgbakwunye n'ụlọ nyocha.
25kg/drum, 200kg/drum, IBC, iji chekwaa ya na ebe dị jụụ. Iji gbochie ìhè anyanwụ kpọmkwem, ụgbọ njem ngwongwo na-adịghị ize ndụ.
Nke gara aga: JY-2125 Defoamer Paper Industry
Osote: JY-2013TSN Nkịtị Defoamer
JY-2050BSN Defoamer Metal Cutting
JY-2123SSN ​​Defoamer Agriculture Industry
JY-2809ASN Ụlọ ọrụ nhicha Defoamer